Boyslove.me waxay si degdeg ah uga jawaabi doontaa sheegashooyinka ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha ee lagu wargaliyay wakiilka xuquuqda lahaanshaha ee Boyslove. Fadlan ogow in sida ku xusan qaybta 512 (f) ee DMCA (17 USC § 512 (f)), qof kasta oo si ulakac ah si khaldan u tilmaamaya in maaddada ama waxqabadku ku xad -gudbayaan waxaa laga yaabaa in lagu qaado masuuliyad.
Haddii aad aamminsan tahay in shaqada nuqul -qoraalkaaga lagu soo guuriyay si ka dhigan ku -xadgudubka xuquuqda daabacaadda, fadlan sii wakiilka xuquuqda lahaanshaha Boyslove macluumaadka soo socda:
Aqoonsiga maaddada la sheeganayo in lagu xad -gudbayo ama ay tahay mawduuca ku -xadgudubka iyo in laga saaro ama marin loo helo taas oo ah naafo, iyo macluumaad macquul ahaan ku filan si loogu oggolaado Boyslove inuu helo agabka (sida URL ama lambarka fiidiyaha);
Macluumaad macquul ahaan ku filan si loogu oggolaado Boyslove inuu kula soo xiriiro: magaca, cinwaanka, iimaylka, lambarka taleefanka, haddii la heli karo;
Boyslove.me ma aha soo -saare wax kasta iyo dhammaan waxyaabaha ku jira mareegaha (Boyslove.me). Iyada oo la tixraacayo diiwaannada sida ku cad 18 USC § 2257 wixii kasta iyo dhammaan waxyaabaha laga helo boggan, fadlan si naxariis leh codsigaaga ugu hagaaji goobta loogu talagalay in la soo saaro.
Boyslove.me ma aha soo -saare wax kasta iyo dhammaan waxyaabaha ku jira mareegaha (Boyslove.me) sida lagu qeexay 18 USC §2257 iyo 28 CFR 75 sidaas darteedna waa laga dhaafay shuruudaha diiwaangelinta.
Boyslove.me waa goob wadaag sawir oo u oggolaanaysa soo -dejinta, wadaagista iyo daawashada noocyada kala duwan ee waxyaabaha dadka waaweyn iyo halka Boyslove.me ay sida ugu fiican u samayn karto iyadoo la xaqiijinayo u hoggaansanaanta.
Boyslove.me waxay u hoggaansan tahay habraacyada soo socda si loo hubiyo u hoggaansanaanta:
Boyslove.me waxay ballanqaadeysaa inay ku dadaaleyso intii karaankeeda ah inay hesho oo joojiso sawirrada ama/iyo cajaladaha xunxun.